version 1.0.1 – သင့်ရဲ့ Widgets တွေ, သင့်ရဲ့လမ်း
ဇူလိုင်လ 6, 2018 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
ဤသည်ဗားရှင်းသစ်, မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ, နှစ်ခု features အသစ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး:
ပဌမ, သင့်ရဲ့အပ်လုဒ်ကို dir ထဲကနေ Widgets တွေ load နိုင်စွမ်း (ပိုပြီးတိတိကျကျဖြစ်ဖို့, wp-content/uploads/transposh/widgets), ဒီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝစ်ဂျက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုလူတိုင်းအဘို့ဖြစ်၏ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံအလံပြောင်းလဲနေတဲ့) လက်ရှိ widget က folder ကိုပယ်ဖျက်တယ်ကြောင့်ပြဿနာ plugin ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ဖူး, ဒီ feature လည်းတခြားသူတွေနဲ့ Widgets တွေမျှဝေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေထဖွင့်လှစ်.
ဒုတိယအင်္ဂါရပ် Google ၏ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည် “rel = အခြား hreflang” နည်းလမ်း, အခြေခံအားဖြင့်အသီးအသီးတွေဖြစ်တဲ့ကိုးကားအပြည့်အဝအရည်အချင်းပြည့် url များအစားဆွေမျိုး url များ အသုံးပြု. သော, ဒီအများကြီးအားဖြင့်သင့် HTML ၏အရွယ်အစားကိုတိုးပွားစေ (သငျသညျကိုထောကျပံ့ဘာသာစကားများ၏နံပါတ်ပေါ် မူတည်., ကိုယ့် site ၏လိပ်စာ၏အရွယ်အစားအားဖြင့်ဒီနံပါတ်ကိုများပြားနှငျ့သငျလျင်မြန်စွာအချည်းနှီးအချင်းစီတောင်းဆိုချက်အတွက် 1k တက် add နိုင်ပါတယ်). ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိ recommandation ရုံဒီ feature ကို disable လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သင်မူကား, Google ရဲ့ Webmaster Tools အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံလိုလျှင်, ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပျော်စရာရှိသည်.
အကြှနျုပျတို့သညျဤဗားရှင်းပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်, မည်သည့် bug တွေ / အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများကိုဆက်သွယ်တှနျ့ဆုတျပါဘူး.
ဇူလိုင်လ 12, 2018 တွင် 6:06 နံနက်
I cannot make all languages active even I have chosen “အပြည့်အဝဗားရှင်းအဆင့်မြှင့် Allow” on settings page
ဇူလိုင်လ 23, 2018 တွင် 1:05 နံနက်